लिंगको आकार कत्रो ? - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
लिंगको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? यौन सन्तुष्टिका लागि लिंगको सही आकार कति हो ? यस प्रकारको सोच प्रायः सबै पुरुषको दिमागमा आइरहन्छ, तर अब यसको उत्तर पनि प्राप्त भएको छ । वैज्ञानिकहरूले यौन सन्तुष्टिका लागि लिंगको आकार कत्रो आकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोका वैज्ञानिकहरूको एक टिमले हालै एउटा सर्वेक्षण गरेका थिए, जसमा १८ देखि ६५ वर्षका ७५ जना महिला सहभागी थिए । ऊक्त सर्वेक्षणका त्रममा महिलाहरूलाई लिंगका फरक–फरक साइजका कृतिम लिंग देखाइएको थियो ।
यो अनुसन्धानबाट आएको परीणाम देखेर वैज्ञानिकहरू पनि अचम्भित भएका छन् । परिणामअनुसार यौन सन्तुष्टिका लागि धेरै महिलाले ६ दशमलव ३ इन्चको आकारलाई सही बताए । यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले ६ दशमलव ३ इन्चको लिंगलाइ उपयुक्त मानेका छन् ।
कसैको लिंगको आकार ६ दशमलव ३ वा ६ दशमलव ४ नभए पनि आत्तिनु भने पर्दैन । किनभने लिंगको औसत आकार ५ दशमलव २ इन्च हुन्छ । उक्त अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने महिलाहरू यौनका लागि लिंगको आकारलाई मात्र महत्व दिँदैनन् । यद्यपि क्याजुअल सेक्सको समयमा भने उनीहरू लिंगको आकारमा पनि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउँछन् ।
लिंगको विकास गर्न के गर्नुपर्छ
भगांकुरको आकार कस्तो हुन्छ अनि यो योनिमा कहाँ हुन्छ ?